မဟာ လူသား's photo.
FB ခိုးတဲ့ ပြဿနာ :D
အခုနောက်ပိုင်း FB ရဲ့ အားနည်းချက်လို့ပဲ ပြောမလား ကျွန်တော်တို့ကပဲ ပေါ့လျော့တာလား ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နည်းပညာ သမားမဟုတ်တော့ သေသေချာချာတော့ မသိပါ ...
သို့ပေမဲ့ FB ကောင့်တခုရဲ့ Email ကို ရရင် Password reset လုပ်ရလွယ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ် ...
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ User Name လိုဖြစ်နေတဲ့ Email address ကို setting မှာ only me လုပ်ထားကြတာပါ ....
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ သတိ မထားမိတာက နောက်ပိုင်း FB အကောင့်လုပ်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FB (Universal Resource Locator(URL) ဖြစ်တဲ့ (www.facebook.com/ နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ Email address ရဲ့ user name ကို ထည့်ပေးလိုက်တာတွေ့ရပါတယ် .ဒါကြောင့် Email ယူပြီး PW reset လုပ်ချင်တဲ့ လူတွေ အတွက် .com / နောက်ကwww.fb.com/Mgmaharဆို....Mgmahar@gmail.com လို့ ယူပြီး reset လုပ်သွားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ် .......
ဒါကို ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Account Settings > General > User Name > Edit
ပြီးရင် abc 123 စသဖြင့် ဖြည့်ပြီး PW ပြန်ရိုက်ကာ saved လိုက်ပါ ဒီလောက်ဆို ရမယ်ထင်ပါတယ်
နောက်တခုကတော့ ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာ သူငယ်ချင်း ၃၊ ၄ ယောက် အကောင့်ရှိနေ ဖြစ်နေရင်လဲ PW reset code ပို့ခိုင်းပြီး ယူလို့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ... ဒီအတွက် ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့ လူတွေကို လက်မခံရဲကြပါဘူး .. ဒီအတွက် FB က မသိပေမဲ့ လက်ခံချင်ရင် လက်ခံနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ် အကယ်၍ friend requests တွေကို accepted လုပ်ပြီးရင် ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ user နဲ့ outside of FBမှာ သိပါသလားလို့ မေးခွန်းလေး အောက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် မသိရင် NO ဆိုတာလေး ရွေးထားလိုက်ပါ ။ thz4ur feedback လို့ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ဒီလောက်ဆို သူစိမ်းတွေလဲ လက်ခံချင်လက်ခံလို့ရလောက်ပါပြီ :D
ကျွန်တော်နားလည်သလောက် ပြောပြတာပါ IT သမားမဟုတ်တော့ မှားနိုင်ပါတယ်........
ကျန်တောတွေကတော့ tools အားကိုးနဲ့ ခိုးကြတာပါ .. လာပေးတဲ့ လင့်တွေ မသိရင် မနှိပ့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ကိုယ်မသိတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ add-ons တွေ မထည့်မိဖို့လိုပါတယ် .... FB ရဲ့ security ပိုင်း အရပေးထားတဲ့ စနစ်တွေကိုသာတိတိကျကျသုံးကြည့်ပါ ခိုးမရပါ.. မတော်ပါသွားရင်တောင် ကိုယ့်အကောင့်က အမှန်အကန်ဆို ပြန်ယူရလွယ်ပါတယ် ...
(End user တွေ အတွက် သိသလောက်လေး သတိပေးတာပါ )
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:35 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook